'खोलामा पैसा हाल्नुस् चलायमान हुन्छ' - UrjaKhabar 'खोलामा पैसा हाल्नुस् चलायमान हुन्छ' - UrjaKhabar
सोमबारदेखि सिंगटीको परीक्षण, प्रसारण लाइन समस्याले विद्युत खेर जाँदै
इपानमा प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने प्रवृत्ति विरुद्ध हामीले लडाइँको माेर्चा समालेका छाैं
‘खोलामा पैसा हाल्नुस् चलायमान हुन्छ’
फागुन ०२, २०७५
‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ जनताको हो । सफल हुने नै छ । सफलता प्राप्त गर्नैपर्छ । हामीसँग हरेक चिज छ । तर, हामी गरिब छौं । यस्तो अचम्म दुनियाँमा कमै हुन्छ । यहाँ प्राकृतिक स्रोत र खनिज छन् । बालुवा चाले सुन निस्कन्छ । हामीसँग हिमाल छन् । जीवन दिने खोलानाला छन् । ताल तलैया छन् तर हामी गरिब छौं ।
खोलामा पानी बगेको छ । जलसम्पदामा हामी अत्यन्त धनी छौं । तर, हामी आफैंले बाल्ने बिजुली छैन । किनेर बिजुली बाल्छौं । यति उर्भर देश छ । किनेर चामल र सागसब्जी खान्छौं । हामीसँग फलाम खानी छ । तर, सियो र काटी पनि हामी विदेशबाट ल्याउँछौं ।
दक्षिण एसियामा ऊर्जा उत्पादन गर्ने पहिलो देश हो, नेपाल । फर्पिङ चन्द्रज्योति विद्युत बनेको १ सय ७ वर्ष भइसक्यो । चन्द्रशम्शेरका पालामा बनेकोले चन्द्रज्योति भयो । यसपछि दोस्रो निर्माण भयो, काभ्रेको पनौतीभन्दा उता खोपासीमा । हामीसँग यत्रा सम्भावना छन् । तर, विद्युत पर्याप्त छैन । हामीले विद्युत किनेर काम चलाइरहेका छौं ।
२०७२ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा दशैंमा मैले घोषणा गरेँ– अहिलेको साल त सकिँदैन । आगामी वर्ष तिहारसम्म हामी अँध्यारो हुन दिँदैनौं । त्यसपछि भारतसँग सहयोग मागियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत ल्याइयो । र, उज्यालो दिन सकियो । अब हामीले यो अवस्था बदल्नुपर्छ ।
हामीसँग हरेक चिज छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । र, हामी सबै चिज भएका गरिब होइनौं । सबै चिज भएका सम्पन्न हुनेछौं । आम नेपालको साझा आकांक्षा सम्पन्न हुने हो । हामीले भनेका छौं, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । हरेक व्यक्ति समृद्धि चाहन्छ । हरेक सुखी हुन चाहन्छ । सुख प्राप्ति मानिसको अन्तिम उद्देश्य हो । मान्छेले जे पनि चाहन्छ, सुख प्राप्तिका लागि । मानिसका हरेक प्रयास, प्रयत्न, संघर्ष र क्रियाकलाप र चेष्टाहरू सुख प्राप्तिका निमित्त हुन्छन् ।
सबै मेहेनत, परिश्रम, पसिना सुख प्राप्तिकै लागि हो । तर, त्यो साझा आकांक्षा अभिव्यक्त गर्न पनि कतिपयलाई टिप्पणी गर्न मन लाग्छ । टिप्पणी गर्छन्, आधारबिनै भने । तपाईंलाई सुख चाहिएको छ भन्दा के आधार चाहिन्छ ? तपाईं सुख पाउन चाहनुहुन्छ भन्ने के–के आधार चाहिन्छ । के–के पुर्याउनुपर्छ कि ? तपाईं धनी हुन चाहनुहुन्छ । समृद्धि खोज्नुहुन्छ । गरिब हुन मन पराउनुहुन्न भन्दा के–के आधार चाहिन्छ । यो वौद्धिक उचाईसँग पनि हैरान भइयो ।
तीन तासेले तास फिटेभन्दा बढ्ता कुरा फिटेको देख्दा अचम्म लाग्छ । अनौंठो लाग्छ । आधार देख्नुभएन ? नेपालले इतिहासमा कहिल्यै सुनेको थियो, यति तीव्रताका साथ योजनाहरू अगाडि बढाएको ? अहिले हामी यहाँ ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ शुभारम्भ गरिरहेका छौं । यसले स–सानो निष्क्रिय बसेको पैसालाई परिचालन गर्छ ।
पैसाको जात यस्तो हो, परिचालित भएर चल्यो भने त्यसले अण्डा पार्छ । चल्ला काढ्छ । र, भुरुरु बनाउँछ । चुप लागेर बस्यो भने खिइदै घट्दै जान्छ । ९० रुपैयाँ तोला सुन मैले किनेको छु । अहिले ६० हजार रुपैयाँ पुग्यो । त्यसबेला ९० रुपैयाँमा एक तोला सुन किनेको भए ६० हजार पुग्थ्यो । ९० रुपैयाँ नै राखेको भए त्यत्ति नै बसिरहन्थ्यो ।
अहिले ९० रुपैयाँमा सुन आउँछ र ! तोला होइन । ९० रुपैयाँले त सुन छुनमात्र पाइन्छ होला । म ९० रुपैयाँ दिन्छु छुन देऊ भन्दा नि नपाइन सक्छ । अर्थात् पैसाको मूल्य घट्दो रहेछ । त्यसकारण हामीले पैसा निष्क्रिय राख्नु हुँदैन । पैसा चलायो भने बढ्छ । विद्या, ज्ञान, सीप चलायो भने बढ्छ । चलेन भने पैसा घट्छ । घट्न दिनु हुँदैन । कुदाउनुपर्छ । पैसा कुदाएपछि, चलाएपछि बढ्दै जान्छ ।
खोलामा पैसा हालेपछि खोलो बग्दै जाने हो । त्यो त झन् बढ्दा चलायमान हुन्छ । त्यसैले अब हामीले गतिशीलता अपनाउनुपर्छ । गतिशील ठाउँमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । तर, यहाँ बिनाआधार भन्नेहरू छन् । आज एउटा अर्को ऐतिहासिक काम भएको जानकारी गराउन चाहन्छु– पानीजहाज कार्यालयको स्थापना नेपालमा भएको छ ।
भारतले गण्डकीमा विस्तृत अध्ययन गरिसकेको छ । मोदीले भारतमा बोल्दा नेपालको सीमा नजिक त्रिवेणीसम्म हामीले पानीजहाज लैजान सक्ने भयौं भनेका छन् । हामीले सर्वे गरिसक्यौं । अब सिमानाबाट हामीले कहाँसम्म ल्याउने हो ? देवघाट वा अन्य कुन ठाउँ ? अब त्यसका लागि धेरै समय छैन । हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि हरेक दिन एक कदम अगाडि बढिरहेका छौं । हरेक दिन एक कदमअघि भन्दा अझ तीव्र रफ्तारमा हिँड्न चाहिरहेका छौं ।
उता पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्यौं । यता जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम सुरु भएको छ । तपाईंसँग १० हजार रुपैयाँ छ भने जलविद्युतमा सेयर हाल्नुस् । विकासका निम्ति एउटा बलियो आधार बनेको छ । आज वा केही वर्षका लागि मात्र होइन । आगामी धेरै वर्षका लागि बलियो जग निर्माण भएको छ । देश बनाउने काममा अहिलेको सरकार स्पष्ट योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेको छ ।
जनताको सरकार बनेको छ । अब गरिबी तथा एलडिसी नेपाल बदलिनेछ । अब विकासशील र विकसित नेपाल हुनेछ । १० वर्षभित्र नेपालले विकासको बाटोमा काँचुली फेर्नेछ । शिक्षित र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति छ । यस्तो स्रोतले भरिपूर्ण भूमि छ । यसको सदुपयोग हुन्छ ।
यहाँ सरकारमा बस्ने वा सरकारमा बसेर हल्लेर समय बिताउनेहरू छन् । सरकार टिक्न नदिने वा सरकार टिक्न नदिने खेलोफड्को गरिरहनेका दिन गए । पहिले मानिसले भारी बोकेर जिन्दगी चलाउँथे । अहिले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था कम छ । कुरा बोकेर जिन्दगी चलाउने धेरै छन् । यो सरकार कुरा बोकेर जिन्दगी चलाउने होइन । अब कुरा बोकेर जिन्दगी चलाउनेका दिन भए । एउटा भिजनसहितको सुदृढ सरकार बनेको छ ।
अब हरेक नेपाली सेयरको धनी हुनेछन् । ३५ दिनभित्र यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आगामी चैत ७ गते कार्यालय समयमा पहिलो सेयर मैले किन्नेछु । देशैले किन्छ । प्राविधिक समय कति लाग्छ त्यो अलग पक्ष होला । तर, न्यूनतम समयमा आयोजना तयार हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना, आयात विस्थापित गर्ने, ऊर्जा तथा इन्धन खपतमा आत्मनिर्भर बन्नेछौं । आयातमा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । यो अभियानले यी पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ ।
केही वर्षभित्र हरेक व्यक्तिलाई सेयरधनी बनाउनेछ । सेयरधनी बनेपछि आयोजना सजिलोसँग बन्छ होइन अरू पनि निर्माण हुनेछन् । यसमा सहभागि हुन म हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु् । आजको दिनलाई हामीले ऊर्जा र जलस्रोतको दिवस भने हुन्छ । एकातिर पानी जाहाजको सुरुवात गरेका छौं । अर्कोतिर, जनताको लगानीमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने शुभारम्भ भएको छ । राष्ट्र निर्माण र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ । यसमा लागौं ।
प्रम ओलीले बिहीबार ‘जनताकाे जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम ‘शुभारम्भका क्रममा राखेकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश
प्रसारण लाइनको टावर नजिक जथाभावी नखन्न प्राधिकरणको आग्रह
एमसिसी ऊर्जा विकासमा ‘कालो बादल’
आइएफसीले हरित आयोजनामा लगानी बढाउन एनएमबीलाई ३ अर्ब ऋण दिने
पेट्रोल लिटरमा ५ रुपैयाँ महंगियो, डिजेल र मट्टीतेलकाे मूल्य पनि...